Ahịa Ọdịnaya maka Ahịa | Martech Zone
Monday, October 14, 2013 Monday, October 14, 2013 Adam Obere
Mgbe anyị wuru Mara ihe ijikọta saịtị, njikọta IDX, njegharị, njegharị mkpanaka, njegharị vidiyo, ire ahịa email, ozi SMS na mbipụta, anyị maara na ịre ahịa ọdịnaya bụ isi ihe na-eme ka ndị ahịa na-ere ahịa karịa. Na, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, ndị ọrụ anyị na-ahụ maka ikpo okwu na-ahụ oke nzaghachi kachasị na ọnụego dị nso.
content marketing abụghị naanị a buzzword ma ọ bụ ụfọdụ unproven, ibuo ahịa azum: ọ na-arụ ọrụ n'ezie. N'ezie, egosiputa ọdịnaya ọdịnaya iji mepụta ihe dị ka okpukpu atọ karịa ọtụtụ na-eduga kwa dollar dị ka nyocha akwụ ụgwọ. Dịka ọkachamara n'ịzụ ahịa ụlọ, agbanyeghị, imepụta ọdịnaya nke na-ege ndị na-ege gị ntị nwere ike isiri gị ike. A sị ka e kwuwe, ndị na-azụ ala na ụlọ bụ otu dị iche iche, na-agbatị ọtụtụ afọ.
Placester emepụtawo infographic a nke na-ekwu maka oke mmetụta ahịa ọdịnaya na-enwe na ụlọ ọrụ Real Estate. Placester na-ewulite Weebụ Weebụ na-arụ ọrụ na-ejikọ atụmatụ mara mma, nnabata, na ntinye IDX / MLS
Tags: idx mwekotainfographictinyeahịa ịre ụlọire ahịa ọdịnaya ụlọire ala na ụlọsaịtị ala na ụlọ
Ọkt 15, 2013 na 4:57 AM
Akwa post! N'ezie na-enye ihe ọmụma .. Enwere m ezigbo ọgụgụ! Daalụ maka ịkekọrịta!